Xildhibaannada faham maka heystaan Heshiiska ka mid noqoshada Hay’adda Damaanada Maalgashiga darafyada badan? – Kalfadhi
November 6, 2019 November 6, 2019 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Guddiga Ganacsiga iyo warshadaha ee Golaha Shacabka Mudane Beenebeene, ayaa Xildhibaanada Golaha ka hor-jeediyay Akhrinta 2aad Heshiiska ka mid noqoshada Hay’adda Damaanada Maalgashiga darafyada badan.
Heshiiskaasi ayaa maalin ka hor laga hor akhriyay Baarlamaanka, waxaana heshiiska intiisa badan uu ku qoranyahay luuqadda Ingiriisiga, inkastoo luuqadda Soomaaligana ay ku jirto balse ma badna.
Xildhibaannada ka aragti dhiibtay Heshiiska ka mid noqoshada Hay’adda Damaanada Maalgashiga darafyada badan, ayaa intooda badan ku baaqay in heshiiska laga dhigo luuqadda Somaaliga, si ay dadka Soomaaliyeed u fahmaan islamarkaana ay u oggaadaan waxa ku jira.
Xildhibaaan, Axmed Maclim Fiqi, ayaa kamid ah xildhibaannada codsaday in heshiiska dhammaantiida luuqadda Soomaaliga laga dhigo isla markaana la geliyo website-yadda.
“Haddii faa’iido ay ku jirto dadka Soomaaliyeed waa in ay fahmaan si looga faa’iideysto. Haddii annaga oo Baarlamaankii ah uusan noo cadeyn heshiiska, haddana luuqadda ingiriisiga uu ku qoranyahay, taasi waxaa ay iska noqoneysaa in aan xubin kanoqono wakaaladaasi, wasiirkeenna saxiixa uu noosoo sameeyay aan gacanta u taagno. Haddii annaga aan fahansaneyn dadkii iyo dowalddiina wey ku adagtahay”, ayuu yiri xildhibaanka.
Xildhibaannada oo fahaman guud ka heysta heshiiska ayaa ka dhigan badbaado, kaas oo ka ilaalinaya khatar badan in uu dalka wajaho.